Rio de Janeiro Carnival, dhaqanka, quruxda iyo dareenka dadka | Safarka Absolut
Rio de Janeiro Carnival, dhaqanka, quruxda iyo dareenka qofka
Mid ka mid ah garoonada ku tusaya astaamihiisa iyo kartidiisa muusigii Sambadrome
In kasta oo Carnival looga dabaaldego magaalooyinka iyo tuulooyinka Brazil oo dhan, Rio de Janeiro ayaa muddo dheer loo arkaayay Caasimada Carnival ee dunida.
Waana inaysan ahayn kaliya carnival ugu weyn laakiin waa halbeegga ka dhanka ah in dhammaan carnival kale la barbar dhigo mid ka mid ah dhacdooyinka farshaxan ee ugu muhiimsan meeraha.
Ku dhowaad qof walbaa wuxuu ka maqlay Rio Carnival halkaasoo mid ka mid ah waxyaabaha ugu waawayn ay tahay inaysan bixin madadaalo oo keliya, laakiin sidoo kale waxay siinaysaa fursad ay ku bartaan dhaqanka dhabta ah ee Brazil.
Waana in Carnival ay aad muhiim ugu tahay dadka reer Brazil, taas oo soo koobeysa dhaqankooda. Waa dhacdo meesha dadka euphoric-ka ay ku ciyaaraan, ku heesaan kuna damaashaadaan tanno baashaal ah habeen iyo maalinba. Runtu waxay tahay in Rio Carnival uu yahay natiijada bilooyin diyaarin ah.
Dadku waxay si xiiso leh u sugaan bilawga Rio Carnival sannad kasta oo ka bilaabma caleemo saarka King Momo kaas oo la gudoonsiiyo fure dahabi ah oo uu gudoonsiiyey duqa magaalada. Sannadkan, bandhigyada "iskuulada samba" ee Sambadom Waxaa la qaban doonaa 1-da ilaa 4-ta Maarso.
Ka dib waa xafladaha goobta oo dhan, jidadka iyo fagaarayaasha, baararka, goobaha lagu caweeyo iyo meelaha kale oo dhan, iyadoo la wareegeysa magaalada Rio de Janeiro oo dhan isla markaana lagu soo gabagabeynayo Rio Carnival parade oo sidoo kale loo yaqaan samba parade agagaarka garoonka Maracana.
Zona Sur (cirifka koonfureed ee Rio) waa meesha ugu fiican ee lagu nagaado. Waxay ku taal xeebta waana qaybta ugu casrisan magaalada. Copacabana, Ipanema iyo Leblon ayaa si wada jir ah u sameeya marxalad aad u wanaagsan oo dhinac walba ku fidisa carnival.
Waa in loo tixgeliyaa in qiimayaashu ay si aad ah uga sarreeyaan xilliyada kale ee sannadka, sidaa darteed waxaa lagugula talinayaa in kiiska lagu sii qabsado waqtigiisa.
Wadada buuxda ee maqaalka: Safarka Absolut » Rio de Janeiro Carnival, dhaqanka, quruxda iyo dareenka qofka
Boortaqiiska, dhulkii carnival